Nyochaa Moto G 2015 | Gam akporosis
Anyị na-alọta na vidiyo na isiokwu ebe anyị chọrọ ịkọwapụta ins na outs nke ndị ọhụrụ gam akporo ọnụ na-ulo oru na mba ahịa, na oge a, Obi dị m ụtọ na-ewetara gị ihe fọrọ nke nta na nke mbụ na Spain, nke a Moto G 2015 nyocha O Ọgbọ nke atọ Moto G, ọnụ ọnụ nke gosipụtara oke dị elu yana na dịka echiche m si dị, a kpọrọ ya oké ndakpọ olileanya nke afọ a 2015.
Echela na site na ebe a Androidsis anyị na-ekwu na ọhụrụ Motorola moto G 2015 bụ ihe ọjọọ ọnụ anya ya, naanị na ndị dị otú ahụ na-atụ anya dị elu na-eleghachi anya na oge na na abụọ gara aga ụdị na akara a tupu na a gasịrị, ma ọ bụ na-atụle ya na ọdụ ndị China ndị ọzọ nwere njirimara yiri nke a ma ọ bụ ọbụlagodi ya na ọnụ ala dị ala, na-enweghị mgbagha, Motorola ejirila ọgbọ atọ a na-echere ogologo oge Moto G Nke ahụ, m na-emeghachi na mgbe niile dịka echiche nke onwe m, a na-akpọ ka ọ bụrụ nnukwu mmechuihu nke afọ a 2015.
1 Nka na ụzụ nkọwa nke Motorola Moto G 2015
2 Ihe kacha mma Motorola Moto G 2015 a
3 The kasị njọ nke a Motorola Moto G 2015
Nka na ụzụ nkọwa nke Motorola Moto G 2015
Nlereanya Moto G ọgbọ 3 XT1541
Usoro njikwa Android 5.1.1 Lollipop
Ihuenyo 5 "IPS Cornnig ozodimgba iko HD 1280 x 720 na 320 dpi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 410 Quad Core na 1'4 Ghz na 64 Bit teknụzụ
Ebe nchekwa RAM 1 Gb nlereanya nke 8 Gb nke nchekwa dị n'ime na 2 Gb nke 16 Gb nke nchekwa dị n'ime
Nchekwa n'ime 8 Gb na 16 Gb - n'efu maka onye ọrụ 4 Gb na ntakịrị ihe karịa 53 Gb n'otu n'otu
Igwe n'ihu 5MP 2560 x 1920
Igwefoto na-aga n'ihu 13 Mpx 4160 x 3120 nwere eriri LED wuru n'ime
Njikọ 2G - 3G - 4G - Bluetooth 4.0 - WiFi - Redio FM
Nkọwa ndị ọzọ IPX67 asambodo nke na-enye ya iguzogide mmiri
Ihe 142'1 x 72'4 x 11 mm
Ahịa Euro 199 maka 8 Gb na 229 euro maka 16 Gb nke ebe nchekwa dị n'ime agbanyeghị na-atụghị anya na a ga-ere ya rue Septemba.
Ihe kacha mma Motorola Moto G 2015 a
Obi abụọ adịghị ya, ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na nke ọhụrụ a Moto G 2015, bụ nsonye nke Snapdragon 410 processor nke ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya ihe nlereanya ahụ 400 si mbipute gara aga. N'aka nke ya, ọ bara uru gosiputa oke oganihu na igwe foto ha, ma na isi ma ọ bụ n'azụ igwefoto nke 13 mpx na-arụ ọrụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa ma na-ewe nnọọ mma foto karịa ya ụzọ, nakwa dị ka n'ihu igwefoto na-ama esịmde a bụghị inconsiderable mkpebi nke 5 mpx.
N'aka nke ọzọ, ndị ikpọ ụda nke ọhụrụ a Moto G 2015Ọ bụ ezie na ụdị nke gara aga ọ bụrịrị ihe kwesiri ekwupụta, na ụdị ọhụụ a ọ ka na-arụ ọrụ karịa ma na-ekwu eziokwu, ọ na-ada ezigbo mma.
E kwesịghịkwa ileghara ya anya IPX67 asambodo nke gosiputara ya dika ihe nlere mmiri mmiri, ọ bụ ihe kwesịrị ịja mma ma kpọtụrụ aha yana mmụba dị ịrịba ama karịa onye bu ya ụzọ.
The kasị njọ nke a Motorola Moto G 2015
Dị ka ọ na-arọ m, dị ka m na-akọwa nke ọma na Nyochaa vidiyo nke Moto G 2015 na ị nwere ike ịhụ na ngosi nke isiokwu a, ọgbọ ọhụrụ a nke atọ Motorola moto G na-enwe nsogbu nke na-adabaghị adaba mgbe ọ na-ekpebi ịzụta ọnụahịa gam akporo a.
Mbụ niile anyị nwere ike ịlele ya na gị nchekwa nchekwa dị n'ime,, na ọ bụ ezie na nke a bụ ụdị 8 Gb, dị maka onye ọrụ anyị naanị karịrị 4,50 GB n'efu. Na nke a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ nwere nkwado maka ebe nchekwa nchekwa dị na mpụga site na Micro SD, ọ ga-anọgide na-adị oke ogbenye, dị oke ala ma dịkwa n'okpuru ọdụ ndị ọzọ na maka otu ọnụahịa ma ọ bụ ọbụlagodi ọnụ ala na-enye anyị okpukpu abụọ nchekwa nchekwa dị n'ime.
Isi ihe ọjọọ ọzọ nke pụtara ìhè bụ obere nchekwa RAM nke a Moto G 2015 nke 8 Gb, na ọ bụ naanị ya nwere 1 GB nke Ram nke doro anya, dị ka m na-egosi gị na vidiyo ahụ, adaba na iji ụbọchị eme ihe nke ụbọchị ahụ. na video ị pụrụ ịhụ otú atụmatụ flashy closings ụfọdụ egwuregwu na ọ bụ adịghị ike nke na-edebe a egwuregwu dị ka Nwụrụ Anwụ na-akpalite 2 na ebe nchekwa, ya bụ, na ndabere ịmalite ya ọzọ na-enweghị mkpa Akwajuru ya mgbe anyị na-agba ya ọzọ.
N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, anyị nwere batrị na-enweghị ike iwepu ya na ebubo mmiri na-eguzogide nke m na-agaghị atụkwasị obi nke ukwuu, yana dịka m kuziiri gị na vidiyo ahụ, n'agbanyeghị otu anyị si ejide n'aka na etinyere mkpuchi azụ ahụ, n'ime naanị nkeji abụọ n'okpuru mmiri, mgbe anyị na-ewepu mkpuchi azụ anyị enweela ike ilele aka mbu dika mmiri enwetala n'ime.
Aka gị azụ ikpe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto G 2015 Review: afọ a nnukwu ndakpọ olileanya
Nyocha na-akpali mmasị. Kedu ọnụ ahịa, Chinese ma ọ bụ na ọ bụghị, ị na-atụle kacha mma na ọnụahịa ọnụahịa a? Think chere na nsụgharị 2gb RAM ga-emejupụta adịghị ike ya?
Nke m chere na ugbu a nwere ike okpueze dị ka eze nke ala dị n'etiti bụ Doogee Valencia 2 Y 100 Pro na 2 GB nke Ram 156 nchekwa, otu mkpebi na ihuenyo dị ka Moto G 2015, ezigbo igwefoto , Nkwado Micro SD, 4 G Dual SIM na ọ na-efu 106 Euro na 6735 Ghz Quad Core MT1P processor na Mali T720 GPU. Na a awa ole na ole m ga-bulite a ntụnyere na m n'ụzọ anụ ahụ mere n'etiti a ọnụ na Moto G 2015.
N'ezie, ụdị 2 Gb ga-emezighị emezi nke ihe nlere a, mana ọ ga-aga 229 Euro, nke bụrịrị ọnụahịa dị mkpa.
Banyere ụdị ọnụahịa ndị China na-eme nke ọma, nke mbụ ị nwere Doogee, Lenovo, Ulephone, Elephone, Meizu ma ọ bụ Xiaomi, ha niile dị elu na ọnụahịa ndị a na-apụghị imeri emeri.
Okwu ews nke maka € 229 ị nwere ihe ndị ọzọ dị mma na nke € 199 bụ nke ka mma ịghara ịkwụsị iche maka ịzụrụ ya. Achịcha nke mere na kpuchie ya bụ Moto X Play mgbe ọ gbadara narị atọ, narị atọ na ihe euro.
Ezigbo enyi a na-akwanyere ùgwù, agbanyeghị na echeghị m na ị ga-azụ ihe nlereanya 8 Gb nke ebe nchekwa nchekwa dị mkpụmkpụ ma dị mkpụmkpụ, yana agbanyeghị ka ịwụnye kaadị SD, data ị ga-enwe ike ịgbanye na ngwa ngwa na egwuregwu ga-aga n'ihu na-ezughi oke, na-ahapụ gị ọsọ ọsọ na-enweghị ebe nchekwa nchekwa dị maka egwuregwu na ngwa.
N'aka nke ọzọ, n'oge anyị na-enweta ọnụ ahịa nke ọnụahịa a yana ọnụ ahịa RAM naanị 1 GB, ọ bụ ihe ihere na nwute mgbe ọdụ ọnụ dị ọnụ ala na-etinye 2 GB nke RAM.
Ihe m kwenyere bụ na ha gaara azọpụta 1 giga xd na mmadụ niile ga-enwe ọ happyụ na ha agaghị ekwu maka about.
Ekele m: Daalụ maka ihu akwụkwọ anyị ruru ugbu a
Ọfọn, maka ụtọ agba, ọ bụrụ na ịchọghị ụdị a, a ga-enwe nsụgharị ahụ na 2gb nke ebule na 16gb nke nchekwa dị n'ime. Ọ ga-akara m mma ịhọrọ nke ahụ ọbụlagodi na ọ bụ ihe dịka 40 dollar karịa.
Nke a nwere 1gb ebule bụ maka nne m, onye na-abanye naanị whatsapp, youtube ma kpọọ oku.
Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu, okwu a na-eburu Hardware nke Moto E 2015, Smartphone nke a na-ere maka naanị 100 Euro, echere m na Moto G3 kwesịrị ma ọ dịkarịa ala ma maka ọnụahịa ahụ ihe nhazi dị elu dị ka Snapdragon 615, a 2 GB Ram na ebe nchekwa nchekwa kacha nta nke 1 GB. Nke ahụ gaara abụ ịgbaso na mbido Moto G na mmụba ọnụahịa nke euro 179 nke ọnụahịa ahụ rere ere ziri ezi. Ihe nlere anya tupu 200 nke na-efu nke a.
Ndakpọ olileanya na-agụ isi okwu a nke edo edo.
Motorola rụrụ nnukwu ọrụ ma gosipụta akara ngosi tupu na mgbe ọ tụrụ na ọkwa ndị dị elu.
Owuwu, akụrụngwa, mmelite, ụda na ihe ndị ọzọ, enweghị nke "Chinese" nke na-erughi otu afọ ha niile amata m maka eziokwu bụ na m raara onwe m nye ịrụzi ekwentị mkpanaaka.
Anaghị m ekwukarị okwu mana iwe were m maka ọkwa a n'ihi na enwere m igwe kwụ otu ebe, igwe 2014 g, nne na nna m abụọ igwe kwụ otu ebe na nwanne m nwoke 2013 moto g na abughi, m kwughachiri, Ọ dịghị ha ka di ka mmiri dika ubochi mbu.
Enweghị m ike ikwu otu ihe gbasara "chinadas" ha na-ewetara m idozi kwa ụbọchị.
Na nkenke, enweghị ike iji ya tụnyere ekwentị ọ bụla dị mkpa na ahịa na ọnụahịa ahụ, belụsọ maka bq na Wiko.
Echiche m dị umeala
Enweghị enyi ọ bụla edo edo bụ Bruno, ọ bụ ezie na enwere m ọchioma iji nwalee ọtụtụ ngwanrọ gam akporo ndị m kpọtụrụ aha banyere mmalite ndị China, ma ọ bụrụ na enweela tupu na mgbe enweghị mgbagha. AH! site n'ụzọ, Motorola echeghị m na ọ nwere ọtụtụ ndị Amerịka ebe m chetara gị na ọ bụ ngalaba nke Lenovo, ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke China na nso nso a na-eme ọfụma.
Ọ bụ otu ihe ịnwale na ihe ọzọ iji. Anaghị m agbachitere motorola maka ịbụ onye Amerịka, amaghị m ebe ị gụrụ ya. Lenovo bu ezigbo akara, xiaomi kwa, jiayu, meizu, ZTE, THL, n'ezie. Ma doogee, ulephone, elephone, iocean, Inew, wdg bụ ihe mkpofu nwere ezigbo njirimara na akwụkwọ.
E nwere otu ihe na-anaghị abịa na akwụkwọ na ọ bụ àgwà nke okwu na okwu, ihe na anwụ ngwa ngwa nke microusb njikọ, wdg.
Ihe ọzọ nke enweghị ihe jikọrọ ya na njirimara bụ ọnụahịa nke nrụzi ka ọ dịkwa mma ịzụta Motorola n'ihi oke nnweta nke akụkụ ahụ.
Na ihe mobile ị na-eji?
Kedu ihe nyocha dị egwu.
Ekele enyi, nke a bụ ihe na - eme ma ị kwuo ihe doro anya, dịka ha na - enweghị oke ma ọ bụ na - eme ka eri nke ika. Nke ahụ nwere ike ịmasị onye ọ bụla.
Ka m na-agụ (amaghị m ma ọ bụ eziokwu), na nsụgharị ọzọ nke gam akporo (Android M) ọ ga-ekwe omume ịfefe ngwa ngwa karịa sd, ya mere Motorola nwere ike ịhọrọ ịhapụ 8 GB nke ebe nchekwa dị n'ime atụmanya nke ọdịnihu.
Ee n'ezie HAHAHAHAHA!. Have ga-ahụ otu ị ga - esi chebe ma kwenye na Motorola, ya na mpempe Moto G nke arụ ọrụ, n'oge a wepụ ọnụ ya naanị 8 Gb nke RAM nke na - enweghị ike itinye ya na ngwa na n'elu na ọ na-etinye ya na gị. 200 euro. Ga-enwe ezi uche na ihe dị ka m hụrụ n'anya na Moto G nso, ị ga-ekweta na ha screwed ma nke ọma.
Ka anyị hụ mmadụ ole n'ime ndị ihe arụrụala ebe a bụ ndị nwere ọgụgụ isi na-aga ịzụta naanị nchekwa 8 GB, nke anyị enweghị 5 hapụrụ n'efu na karịa naanị 1 GB nke Ram.
Ndị enyi, gịnị mere Doogee F3 inye ego? Daalụ!
Enwere ihe ndị m anaghị ahụ nke ọma katọrọ n'isiokwu a. Ọ nwere mkpọka mgbe egwu na-akpọ n'ihi na o nwere naanị 1Gb.? Eziokwu bụ na ọ bụrụ na m chọrọ igwu egwu, azụrụ m ụdị ọdụ ọzọ, ọnụ ọnụ a na-eche echiche ikwu okwu na WhatsApp na obere ihe ọzọ. Ndị na-agba chaa chaa dị obere ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị na-achọ ya naanị maka ihe ndị ahụ.
Aghọtara m na enweghị ike iwepụ batrị n'ihi na a ga-emechi ya ka mmiri ghara ịmị ya.
Ma ọ bụghị ya, ọ dị ezigbo mma, na 8Gb na-echeta ka na-etinye. Enwere m ihere.
E nwere ọtụtụ ndị ọrụ na-eji etiti na-egwu egwuregwu iji kpọọ yana ọtụtụ n'ime ọnụ na m nwere obi ụtọ ịnwale ebe a na-enye ezigbo nsonaazụ maka ọnụahịa dị ala karịa nke a. Banyere nguzogide mmiri na na batrị ga-abụ nke na-enweghị ike iwepụ, ọ bụghị eziokwu, maka ịnwale Samsung Galaxy S5. Inwe batrị na-enweghị iwepu pụtara na mgbe ọ malitere ịda, ụgwọ nke dochie ya ga-abụ nke dị elu karịa nke ọnụahịa ị nwere ike ịgbanwe nke gị site na ịzụrụ ngbanwe mbụ nke ihe dị ka euro 20, site na ndị ọzọ ị nwere ụgwọ iji bụrụ onye ọrụ aka ma ọ bụ ịbanye na SAT, nke anaghị adịkarị ọnụ ala.
Eziokwu bụ na ọbụnadị na nne m ga-azụta ekwentị dị ụkọ ma ọlị, m ga-etinye ọgụ na ya n'ihi na ọ kwụgidere, dịka ọ dịlarị na Alcatel ot pop c7 nke o nwere, taa eziokwu dara mkpụmkpụ .. Ọ dị mma nyochaa!
Banyere doogee valencia 2y100pro, i nwere ike ikwu na ọ? M na-agụ na batrị bụ a obere mkpụmkpụ, m na-emekarị na-eji a mobile a otutu na m na-achọghị ya ka ọ kwụgidere ma ọ bụ na mgbe ọnwa 3 nke mobile bụ uru mụ onwe m ma ọlị na m ga-azụta ọzọ, kedụ uru na ọghọm ndị ekwentị a nwere? Ọ bụrụ na ị kwadoghị igwe a, kedụ ụdị ndị dị na mpaghara ahụ ị ga-akwado? I meela nke ukwuu maka nzaghachi, ekele
Volkswagen mara ọkwa atụmatụ maka gam akporo Auto
Nsụgharị ndị a na-egosi ihe atụmatụ nke Samsung Galaxy Note 5 ga-adị